I-China BT600S Basic Variable-Speed ​​Peristaltic Pump ifektri nabahlinzeki |Ukuhola
I-BT600S Basic Variable-Speed ​​Peristaltic Pump
Ipompo ye-BT600S ehlakaniphile ye-peristaltic eguquguqukayo, ene-Cortex-M3 core processor, ikhwalithi ephezulu ye-stepper servo motor drive, ukunemba kokulawula isivinini ngu-± 0.2%, ukulawulwa kwesivinini esingenasinyathelo sokhiye bemaski (ububanzi besivinini 0.1-600 rpm).Ingakwazi ukufanisa inhloko yepompo yokusebenza ephezulu ehlukahlukene, njengochungechunge lwe-DG, YZ15, YZ25.
•Uhlelo lwesoftware ye-LF-LCD-OS, isibonisi se-LCD se-lattice esichaza kakhulu.
•Ikhwalithi ephezulu kanye ne-torque ephezulu yesinyathelo se-servo motor drive, ukunemba kwesivinini, ububanzi obubanzi, ukuzinza kokusebenza, ukudluliswa kokugeleza okunembayo okuphezulu.
Ukusebenza kokhiye kwemaski yezimboni, kulula futhi kulula, ukuqina okuphezulu.
•I-LF-Easy Change Universal design, ukuphuma kwetorque enkulu, ukunwebeka okuqinile, kungafanisa ikhanda lepompo elisebenza kahle elihlukahlukene.
•Qala/Yima, lungisa isivinini, isiqondiso esibuyiseleka emuva, isivinini esigcwele kanye nenkumbulo yesimo (inkumbulo yamandla-ehlisa).
•Amapharamitha wesikhathi sokusebenza, isikhathi sokuphumula kanye nezikhathi zomjikelezo angasethwa ukuze ahlangabezane nezidingo zesikhathi, ubuningi, ukukhipha uketshezi nokuhlola ukugeleza.
•Ukuma kwesivinini esinesivinini esinensayo kanye nomsebenzi wokumunca, okungavimbela ngempumelelo ukuwisa uketshezi lapho umshini ume.
•Umsebenzi wokukhiya ikhibhodi ukuvimbela ukusebenzisa kabi.
•Ukuqala okukude, ukulungisa isivinini kanye nokusebenza kwesikhathi kungenziwa ngokusebenzisa isofthiwe ye-LeadFluid APP.Iphinde ibe nemisebenzi yokuqapha efana nokumisa i-alamu, ukuguqulwa kwe-pump tube nokunye.
•Izindlu zensimbi engagqwali 304, ukuvimbela okusebenzayo kokuguguleka kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo, ukuzihlanza kalula.
•Isakhiwo sangaphakathi samukela umklamo wokuhlukanisa ungqimba oluphindwe kabili, futhi uhlelo lwesifunda luhlinzeka ngokuvikeleka okukhethekile, okuthuthukisa ngokuphumelelayo ukumelana nothuli, umswakama-umswakama, ukuphikisana nokubola kanye ne-oxidation.
•Isici esikhulu sokulwa nokuphazamiseka, idizayini ye-voltage ebanzi, ifanele indawo eyinkimbinkimbi yokuphakelwa kwamandla.
•Isixhumanisi sokuxhumana se-RS485, iphrothokholi entsha ye-Modbus, kulula ukuyixhuma ngamadivaysi okulawula ahlukahlukene.
•Amasiginali wokulawula izimboni eziningi ezamukelekayo ukuze alawule isitobhisi sokuqala, inkombandlela ebuyiseleka emuva nokulungiswa kwesivinini, isihlukanisi esihlanganiswe ngokubonakalayo.
•Sekela ukuqalisa kokuma, isiqondiso esibuyiseleka emuva, ukuphuma kwesignali yesimo sokusebenza kwesivinini samanje.
•Iphrinta yangaphandle eshisayo (uyazikhethela), amapharamitha wokusebenza kokuphrinta ngesikhathi sangempela.
•Umtshina wokuvuza ongazikhethela, inzwa yokucindezela, i-flowmeter, ukushintsha unyawo, isidambisi senhliziyo, ikhanda elishisayo nezinye izesekeli ukuhlangabezana nezidingo zomuntu ngamunye.
Okwedlule: I-BT301S Basic Variable-Speed ​​Peristaltic Pump
Olandelayo: I-BT101F Intelligent Dispening Peristaltic Pump
Ibanga lokugeleza 0.006–2900mL/min
Ukulungiswa kwesivinini 0.1 rpm (isivinini ≤100 rpm), 1 rpm (isivinini＞100rpm)
Imodi yokubonisa Iwindi 77mm*32mm, Monochromatic 132*32 lattice liquid crystal
Isixhumi esibonakalayo solimi Ukushintsha phakathi kwesiShayina nesiNgisi
Imodi yokusebenza Ukhiye wemaski wezimboni
Ukukhiya ukhiye Cindezela isikhathi eside ukhiye wokukhomba ukuze ukhiye, cindezela isikhathi eside ukuqalisa kanye nokhiye wokumisa ukuze uvule
Umsebenzi wesikhathi Isikhathi sokusebenza esinesikhathi 0.1-999 S/Min/H/D, isikhathi sesikhawu 0.1-999 S/Min/H/D
Izikhathi zomjikelezo 0-999 (0 Umjikelezo ongapheli)
I-Back Suction angle 0-720°
Okokufaka kwesiginali yokulawula kwangaphandle Qala/Misa: ukuthintana okwenziwayo, izinga lokufakwayo kokulawula kwangaphandle 5-24V.Isiqondiso esibuyisela emuva: ukuthintana okwenziwayo, izinga lokufakwayo lokulawula kwangaphandle 5-24V.Lungisa isivinini: ubuningi be-analog 0-5V, 0-10V, 4-20mA ingasetha
Ukukhipha isiginali yokulawula kwangaphandle Qala / Misa: isignali yezinga (ilandela i-voltage yokufaka).Isiqondiso esibuyisela emuva: isignali yezinga (ilandela i-voltage yokufaka).Isimo sesivinini: ubuningi be-analog 0-5V
Isixhumi esibonakalayo sokuxhumana RS485, MODBUS protocol iyatholakala.I-DB15 yokulawula yangaphandle interface
Indawo yokusebenza Izinga lokushisa 0 ~ 40℃, umswakama ohlobene＜80%
Ubukhulu 264×150×270 mm (L*W*H)
Isisindo sokushayela 5.5 KG
I-BT600S Esebenzayo Yekhanda Lephampu kanye neThubhu, Amapharamitha wokugeleza
Isilinganiso Sokugeleza Kwesiteshi Esisodwa(mL/min)
I-Lead Fluid BT600S eyisisekelo eguquguqukayo-speed ump show ump ividiyo.
I-BT300F Intelligent Dispensi...
I-WT600S I-Torque Enkulu Ehlukahlukene...
I-WG600F Industrial Intellige...